परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अाज चीन जाने, के छ एजेण्डा ? - Everest Dainik - News from Nepal
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अाज चीन जाने, के छ एजेण्डा ?
काठमाडौं, बैशाख १ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओली वैशाखभित्रै चीन भ्रमणमा जाने
याे पनि पढ्नुस मधेसी मोर्चालाई ज्ञवालीको चुनौति–‘जनादेश लिएर संविधान संशोधन गर्नुस्’